Iindaba-Ukusebenza emva kokusilela kwentloko yesilinda yegasket
Ukusebenza emva kokusilela kwentloko yesilinda yegasket
Ukuba imoto yonakala xa uqhuba, zininzi izizathu zokungaphumeleli, kwaye lonke icandelo linokungaphumeleli. Kuza kwenzeka ntoni kwisilinda yentloko ye-gasket ukusilela? Imeko eneenkcukacha uya kuyinikwa ngumenzi wethu. Makhe ndiyazise.
Ngenxa yokuba itankana lesilinda linomsebenzi wokutywina xa lisetyenziswa, ukuba icandelo liyasilela, ngokuqinisekileyo liya kuba nokusetyenziswa okungaqhelekanga. Ukuba ukusebenza kwayo ngokutywina akuqinisekiswanga, ioyile kunye namanzi avaliweyo ziya kuvuza, nto leyo eya kuthi ichaphazele ukusebenza kwezinye iindawo.
Ingxolo engaqhelekanga yenzeka ngokubanzi; ukuntywila kwitanki lamanzi kunye netanki yamanzi encedisayo yemoto; ukuqhuba buthathaka kwemoto; umsi omhlophe kumbhobho wokukhupha imoto, onokubangelwa sisizathu sokungaphumeleli kwesilinda gasket. Ezi zinto ziqhelekile, kodwa ziya kubeka emngciphekweni ukhuseleko lwemoto, ke kufuneka ilungiswe kwaye itshintshwe ngexesha.
Ixesha Post: Jan-14-2021